... 9:14:00 PM
၁ ယူလိုက်ဦးမယ်နော် ကိုမင်းအိမ် .. ပြီးမှ အေးဆေးဖတ်မယ် ... တစ်နေကုန် အသစ်ထိုင်စောင့်နေတာ .. အဟောင်းဖတ်ရင်းနဲ့ :D
23 June 2009 at 9:52 PM
ဌက်အကြောင်းလေး ထင်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဖတ်ခဲ့တယ် .. တကယ်တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမှ မဟုတ်တာ ... ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို သွယ်ဝိုက်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သရုပ်ပေါ်အောင် တင်ပြသွားတယ် ... ကောင်းတယ်ဗျာ ကိုမင်းအိမ် .. အဲလိုတွေးပြီး ဖတ်ရတာမျိုးကို သဘောကျတယ် ... ကျွန်တော်လည်း အစာလေးတလုတ်အတွက် စိတ်မပျော်ပဲ သရုပ်ဆောင်ပြနေရတဲ့ အဝေးရောက် ငှက်ငယ်လေးတွေ အတွက် ရင်နာမိပါတယ် ... သူတို့လေးတွေ ပျော်တဲ့ အရပ်မှာ သူတို့စွဲလန်းတဲ့ အစာရေစာတွေ ပေါများပါစေလို့ ကျွန်တော်လည်း ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ..
ငှက်ကလေးတွေလဲ သူတို့ငှာနေကို ပြန်ချင်ရှာမှာပေါ့
ဦးဦးသွားတာ အားကျသွားလို့ ဟတ်ဟတ်
ဘယ့်နှယ် စာအများကြီးမရေးဖို့ ထိန်းချုပ်ရတာတုန်း။ စိတ်ထဲရှိသလောက်ရေးပါဗျ.
ငှက်လေးနဲ့ ဆက်စပ်အတွေးကတော့ ကောင်းပါ့ဗျာ
အမြင့်ပျံငှက်များ လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်များလား .. အင်း..
23 June 2009 at 10:51 PM
[အရာအားလုံးကို စည်းကမ်းဆိုတဲ့ ဘောင်တစ်ခုတည်းကနေ ထိန်းချုပ်ထားတာ တော့ နမူနာယူဖို့ကောင်းပါတယ် ၊၊]
နမူနာယူဖို့ ကောင်းသလို အစိုးရက အဲ့လို လိုက်မလုပ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ စည်းကမ်းရှိကြရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ကျမကတော့ တွေးမိတယ်၊ နိုင်ငံကြီးသား ပီသစေချင်တာပါ၊ ကျမ စင်္ကာပူကို အဲ့ဒီတစ်ခု အားမရဘူး၊ We areacomplete nanny state.
ငှက်ကလေးတွေကရော စွဲစေမယ့် အစာကျွေးထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ သူတို့အတွက် အိမ်ရာနဲ့မခြား နေရာကောင်းတစ်ခုရလို့ .. ပြီးတော့ မပူမပင် မကြောင့်မကျနေရလို့ .. အစားအသောက်အတွက် မပူရလို့ .. လိုလိုချင်ချင် လုပ်ပေးတယ်လို့ရော ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးလား? ရေကြည်ရာ မြက်နုရာဆိုသလိုပေါ့၊
ငှက်ကလေးတွေထဲမှာလဲ မွေးရပ်မှာပဲ ပျော်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေ ရှိသလို စူးစမ်းချင်တဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်ရှာလိုတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဒီလို မတူတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ ရှိမှလဲ မွေးရပ်က တိုးတက်လာသလို ဗဟုသုတလဲ စုံလာမှာလို့ ထင်တယ်၊
ကန့်လန့်တိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အရင်တည်းက စိတ်ထဲမှာ ရှိတာ တိုက်ဆိုင်လို့ ပြောမိတာပါ၊
ဒီအတွေးလေးကို ရေးချင်ရင် စာအရှည်ရေးပါဦး...
စာကောင်းလေးမို့ပိုလှစေချင်လို့ ပါ။
သူတို့ပျော်တဲ့ အရပ်မှာ သူတို့စွဲလန်းသွားမိတဲ့ ငှက်စာလေးတွေ ပေါများပါစေဗျာ တဲ့လား။
23 June 2009 at 11:12 PM
အံမလေး တငှက်တည်း ငှက်နေတာ ကျောတောင် ချမ်းလာပြီ ဟွန်းနော် လူကြီးး ငှက်အကြောင်းရေးတာ ဘာလို့ များကို ခွင့်မတောင်းတုံးးးး ဟွန်းးး တရားစွဲမယ် ဘာမှတ်လဲ
23 June 2009 at 11:20 PM
ကိုမင်းအိမ် အမြဲတမ်း မွေးရပ်မြေကို အမြဲတမ်းလွမ်းနေပုံရတယ်။
အစာလေးတလုတ်အတွက် စိတ်မပျော်ပဲ သရုပ်ဆောင် ပြနေရတဲ့ အဝေးရောက် ငှက်ငယ်လေးတွေ အတွက် ရင်နာမိတာ အမှန်ပါ
24 June 2009 at 9:33 AM
အဝေးရောက် ငှက်ငယ်လေးတွေကို စောင်းပေးပြီး ဖေါ်ပြသလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် ၊၊ အမြင့်ပျံ ငှက်ငယ်လေးတွေ ကိုလည်း ထာဝရလေးစားလျက်ပါ ၊၊ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာလည်း ၂ ဖက်စလုံးမျှထားပေမယ့် အရေးအသားညံ့ဖျင်းမှူကြောင့် လိုအပ်သလိုဖြစ်ခဲ့ရင် ခွင့် လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်အပ်ပါသည် ၊၊
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း အဝေးရောက် ၊ အမြင့်ပျံ ငှက်ငယ်တစ်ကောင်သာဖြစ်ပါကြောင်း ၊၊
အမြင့်ပျံဖို့ ကြိုးစားရင်း အဝေးရောက် ခဲ့ရပါကြောင်း အားလုံးလည်း ဘ၀တူတွေမို့ ခံစားမိကြမှာပါလေ ၊၊
အမြင့်ပျံ ရင်း နဲ့ အဝေးရောက်လာ ရတာတဲ့လား..။ အရမ်း ကောင်းပါတယ် ရှင်...ပျော်တဲ့ နေရာမှာရှိနေတဲ့ ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဖို့ မပျော်တဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေရတဲ့ သူတွေ အတွက်...တော့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ စာတပုဒ်ပါပဲ...။ အားပေးပါတယ်။
လိုရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရောက်တယ်ဗျာ ....
24 June 2009 at 10:21 AM
ငှက်လေးတွေနှင့် ယှဉ်ပြီး တွေးထားတာလေးကို သဘောကျတယ်။ ပုံလေးတွေကို ကြည့်သွားပါတယ်။
24 June 2009 at 2:52 PM
မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကို ပုံနဲ့တကွ ဗဟုသုတတွေ
စိတ်ထဲ ရှိသမျှ ပြောပြပါဗျ။ စာရှည်လဲ ဖတ်မှာပေါ့။
ကော်ဖီသောက်ဖို့ လာခေါ်ပီး ညီက ငှက်စာကျွေးနေတယ်။ ဘယ်လို ညီလဲ။
သွားတာတောင် မခေါ်လို့ တော်တော် တင်းသွားဘီ။ ကော်ဖီမသောက်ပဲ ပြန်တယ်။ ဒါပဲ။
လာရောက် ဖတ်ရှုရုံမက ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပေးပါ သူငယ်ချင်းများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ ၊၊
ှုငှက်ကလေးတွေက အစာအတွက် အပြန်ခက်(အပျံခက်)နေတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးလေး သဘောကျမိပါတယ်။
မမီးတို့နဲ့ တူနေပြီ.. ငှက်ကလေးတွေက .. အစာတစ်လုတ်အတွက် ကိုယ်ဌာနေကို မပြန်ဘဲး သူများအလိုကျ သရုပ်ဆောင်နေကြသလို. မမီးတို့လဲး. ကိုယ့်ဌာနေကို စွန်ပြီးလာကြတာဘဲး....
"အမြင့်ပျံဖို့ ကြိုးစားရင်း အဝေးရောက် ခဲ့ရတယ်တဲ့..."
ကိုယ်တိုင်လည်းလေလွင့်ငှက်ကလေးဘ၀ကနေ မိဘတွေရဲ့ အသိုက်အမြုံလေးဆီကို အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ချင်သလိုပဲ....သူငယ်ချင်းအားလုံးလည်း ဘ၀ နဲ့ ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျနိုင်ကြပါစေ...
18 June 2010 at 1:26 AM